> Resource > Android > Sida loo rogo ama daanyeer in MP3 u Google Music
Daanyeer, caanka ah sida Daanyeer ee Audio, sida lagu sheegay in la siiyo 50% riixo oo aan khasaaraha tayada audio. Si kastaba ha ahaatee, Google Music ma taageeri sida qaab audio weyn, u badan tahay sababtoo ah waa qaab lahaansho ee Daanyeer ee Audio.
Halkii ay ka sugayaan Google ku darto taageero daanyeer in Google Music ah, aad haatan u bedeli karaan tayada sare daanyeer in MP3 in heerka yara 320kbps kaas oo sidoo kale bixisaa tayada audio hufan. Waxaa ka mid ah Converter badan oo maqal ah halkaas, Wondershare Video Converter waa caan ah ay wax soo saarka audio tayo sare leh iyo sidoo kale shawladda audio si loogu badalo music video si maqal ah.
Si fudud Beddelaan daanyeer in MP3 in ay geliyaan si ay Google Music
Download iyo rakibi Video Converter , waxaad ka heli doontaa ugu interface user hufan sida hoos. Waxaad tahay oo kaliya 3 talaabo ayaa ka tayo sare leh MP3 faylasha loogu Google Music.
Tallaabo 1: Ku dar daanyeer in Video Converter
Halkan waxa ku jira 2 siyaabo optional inay dajiyaan files daanyeer si aad u daanyeer si Google Music MP3 Converter:
1. Si toos ah jiidi oo hoos u files daanyeer ee barnaamijka.
2. Click on the " Add Files "button.
Daanyeer sokow, dad badan oo kale files audio waxaa taageera daanyeer si Google Converter Music, sida WMA, regelingen, M4P, M4A, M4B, AAC, iwm
Talaabada 2: MP3 format Set sida wax soo saarka
320kpbs MP3 format waa ugu fiican ee Google Music. Sidaa darteed, furo " Qaabka Output "liiska, dooro MP3 ka" qaab ">" Audio "subcategory sida wax soo saarka. Markaas riix "Settings" in la beddelo Rate Inyar in 320 kbps. Tani waxay wax yar kor u qaadi doonta finalka size file MP3 ah, laakiin aad u hesho halkii ay ka tayo wanaagsan audio.
Tallaabo 3: Ka billow daanyeer in MP3 Conversion
Waa markii si ay u bilaabaan diinta daanyeer in MP3 files ku dhowaad aan khasaaro tayada wax. Guji " Beddelaan "button iyo Video Converter transcode doonaa files daanyeer in MP3 files.
Marka daanyeer in MP3 diinta ku dhameysatay, isticmaalaan Manager rasmi Google Music inay geliyaan tayo sare leh MP3 files si Google Music .
Waa maxay daanyeer?
Daanyeer, laga yaabee gaaban All-ku dhawaad ​​qaab (marka laga reebo Google Music, dabcan), waa qaab sameecadda audio sida Apple sameecadda ah, RA, AIFF, iwm Waa qaab maqal ah ee ay soo Daanyeer ee Audio, shirkad caan ku tahay ciyaaryahan MonkeyMedia. Si ka duwan habka lossy riixo audio kuwa, Daanyeer ee audio daanyeer ma tuur xogta halka Deji in files. Iyo in sababta size file ay inta badan waa weyn. Nasiib darro, inta badan qaabab sameecadda audio ma taageersana by Google Music, marka laga reebo il furan qaab sameecadda FLAC. Halkan Ka eeg faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa qaabab audio waxaa taageera iyo waxa aan la gelin karo in Google Music.
Isku day ama iibsadaan daanyeer in Google Music MP3 Converter: